Ny fahazoan-dàlana amin'ny fitaterana an-dranomasina any Eropa? Manampahaizana momba ny mpisolovava FIDULINK
TENIN'NY TRANSPORT TRANSPORT
LESENY TRANSPORT TRANSPORT MARITIME
FIVORIANA NY FIVORIANA TRANSPORTE
Nandritra ny 10 taona mahery dia manome torohevitra sy miara-miasa amin'ireo mpanjifany amin'ny dingana sy ny fahazoan-dàlana ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na ny olona i Fidulink mba hahafahan'izy ireo manokatra ny orinasam-pitaterana an-dranomasina. Fanohanana feno amin'ny lalampanorenana rakitra hahazoana fahazoan-dàlana fitaterana entana an-dranomasina na olona fa misy koa amin'ny lalampanorenan'ny orinasa ao aminy sy ireo any amin'ny sehatra mihoatra ny 56 eto ambonin'ny tany.
Serivisy fanamboarana sy fihodinana vita amin'ny vatosoa hanolotra serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Ekipa manam-pahaizana manokana momba ny indostrian'ny fandefasana manerana izao tontolo izao. Noho ny traikefa ananantsika sy ny fitaovana ary ny vahaolana ahazoana ny fahazoan-dàlan'ny fitaterana an-dranomasina dia ho dingana tsotra ary tsy ho sakan-dalana intsony.
Miaraka amin'ny traikefa toa anay dia tsy afaka milaza aminao afa-tsy ny fahazoana ny fahazoan-dàlana ho an'ny Maritime Freight na olona sy zavatra tsotra izahay.
TOROHEVITRA FAMPIANARANA MARITIME TRANSPORT
FIDULINK manolotra fanampiana ho an'ny mpanjifany amin'ny dingana apetraka sy ny làlan-draharahan'ny fahazoan-dàlana momba ny fahazoan-dàlana Maritime fitaterana entana na olona. ny mpiasa FIDULINK manatanteraka ny lalàm-panoratana ny fangatahanao amin'ny fahazoan-dàlana Maritime Freight na mpandeha mpandeha.
Raha te hahazo vaovao misimisy momba ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny Maritime Freight na People, dia mangataha torohevitra fotsiny FIDULINK.
SORATY NY FANAVOTANA TRANO FIDERANA AN-TRANO FOTOTRA NA ATAO TOKONY
SOCIETY MARITIME TRANSPORT
Te-hamorona orinasam-pitaterana an-dranomasina na mpitatitra mpandeha ve ianao? Makà hetsika fitaterana an-dranomasina ho an'ny entana na olona.
Ny fananganana orinasam-pitaterana an-dranomasina mpitatitra entana na olona ao anatin'ny andro vitsivitsy dia azo atao miaraka amin'ny vahaolana amin'ny FIDULINK ny fametrahana ny orinasanao fitaterana, ny lalàm-panorenan'ny rakitra fangatahana fahazoan-dàlana ary ny fombafomba fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny zotram-pitaterana an-dranomasina na olona, ​​fampidirana banky, fametrahana fomba fandoavam-bola, trano ary ny famoronana ny tranokalanao.